Ukhetho lwasimahla lweeleta zoYilo lweWebhu eziNgcali | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukukhetha ifonti simahla kubaqulunqi bewebhu abaziingcali
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo sikubonise indawo yokuqala Iifonti ezisikiweyo zobungcali kuyilo lwewebhu. Kule nxalenye yesithathu ndikuzisela ukhetho lwezona zinomdla kakhulu kunye nenqaku elipheleleyo le-18 ongayisebenzisa kuyilo lwakho. Ndiyakukhumbuza ukuba ungafikelela kumacandelo amabini okuqala repertoire yethu kule khonkco kunye ukusuka apha.
Ukuba sikhangela kwiwebhu sinokufumana isiseko esihle esinokuthi sisebenze kunye nokuphuhlisa umsebenzi wethu. Yonke into iya kuxhomekeka kubuchwephesha beprojekthi yethu kwaye kunjalo uhlobo lomthengi kunye noluntu esijolise kulo.
Zonke zikhululekile kwaye ungazifumana kwiwebhu, nangona ndibaqokelele bonke kwifayile efanayo endenze ukuba ifumaneke kuye wonke umntu I4sha. Ungaze ulibale ukubaluleka kwale nto, xa sikhetha ifonti esibhaptiza indawo yethu ngandlela thile, songeza ezinye iimpembelelo, ezinye izingcaciso kunye nexabiso elongeziweyo. Thatha ithuba lokuba namhlanje sinobuninzi bamathuba asimahla kwaye ngokuchanekileyo kwesi sizathu ukukhetha enye yazo kunokuba nzima. Xa ujongene nokungazithembi, zama ukuba ungalahli ingqalelo. Uya kufumana imimangaliso yokwenyani, kodwa ayizizo zonke ezihambelana nobuntu bengcinga yakho, yeshishini olimeleyo, ke kuya kufuneka ugcine iinjongo zakho engqondweni kwaye uhlalutye ngononophelo uhlobo lwesindululo sakho.
Ungayifumana ipakethi yethu ukusuka eli khonkco lilandelayoNgaphandle kokuthetha ... Yonwabele!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Ukukhetha ifonti simahla kubaqulunqi bewebhu abaziingcali
Ungasele ulayishe izinto kwenye indawo, mega umzekelo, ukuba i-4shared is crap kwaye igcwele ngogaxekile.
Incwadana yesazisi ehlanganisiweyo: Ukusetyenziswa kwetywina kwinkxaso ebonakalayo
Khuphela i-Icon yoKwakha kunye noKwakha i-Scoop kwiVecteezy